Miara-miasa amin'i Microsoft i Heathrow hiady amin'ny fanondranana biby an-tsokosoko tsy ara-dalàna
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Miara-miasa amin'i Microsoft i Heathrow hiady amin'ny fanondranana biby an-tsokosoko tsy ara-dalàna
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Miara-miasa amin'i Microsoft i Heathrow hiady amin'ny fanondranana biby an-tsokosoko tsy ara-dalàna.
Ny varotra bibidia tsy ara-dalàna dia anisan'ireo heloka bevava dimy mampidi-bola indrindra eran-tany ary matetika ataon'ny tambajotra mpanao heloka bevava voalamina tsara izay manararaotra ny fitaterantsika sy ny rafitra ara-bolantsika mba hamindrana ireo vokatra biby tsy ara-dalàna sy ny tombom-barotra amin'ny heloka bevava manerana an'izao tontolo izao.
Heathrow dia miara-miasa amin'ny Microsoft, UK Border Force CITES ary Smiths Detection mba hametraka ny rafi-pitsikilovana artifisialy voalohany eran-tany izay manasongadina sy mikendry ny hampitsahatra ny fanondranana biby an-tsokosoko amin'ny seranam-piaramanidina.
Project SEEKER dia naseho tamin'ny HRH The Duke of Cambridge tamin'ny hetsika iray tao amin'ny foiben'ny Microsoft UK androany.
Taorian'ny andrana mpisava lalana tao Heathrow, Microsoft dia miantso ny foibe fitaterana eran-tany mba hampiasa ny rafitra hanampy amin'ny ady amin'ny indostrian'ny fanondranana biby an-tsokosoko tsy ara-dalàna mitentina 23 miliara dolara.
Heathrow dia niara-niasa Microsoft mba hitsara ny rafi-pitsikilovana artifisialy voalohany eran-tany hiadiana amin'ny fanondranana an-tsokosoko bibidia tsy ara-dalàna. Ny 'Project SEEKER' dia mahita ny fanondranana biby an-tsokosoko entana sy entana mandalo eny amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny alàlan'ny scan hatramin'ny 250,000 harona isan'andro. Nahitana taham-pahombiazana 70%+ izany ary nahomby indrindra tamin'ny famantarana ireo zavatra ivoara toy ny tandroka sy tandroka. Amin'ny alalan'ny famantarana ireo entana fanondranana maro kokoa sy teo aloha, manana fotoana bebe kokoa, sehatra ary fampahalalana bebe kokoa ny manampahefana hanenjika ireo mpanao trafikana heloka bevava sy hiadiana amin'ny indostrian'ny fanondranana biby an-tsokosoko tsy ara-dalàna mitentina 23 miliara dolara.
Ankoatry ny Microsoft, Project SEEKER dia novolavolaina niaraka tamin'ny UK Border Force sy Smiths Detection ary tohanan'ny Royal Foundation. Ny mpamorona Microsoft dia nampianatra ny Project SEEKER hamantatra biby na vokatra toy ny vokatra tsy ara-dalàna ampiasaina amin'ny fanafody, ary ny fitsapana ao amin'ny Heathrow dia naneho fa ny algorithm dia azo ampiofanina amin'ny karazana rehetra ao anatin'ny roa volana monja. Ny teknôlôjia dia mampandre avy hatrany ny mpitandro ny filaminana sy ny manamboninahitra Border Force rehefa mahita zavatra bibidia tsy ara-dalàna ao anaty entana na entana, ary azo ampiasaina ho porofo amin'ny fitsarana heloka bevava amin'ireo mpanondrana an-tsokosoko ny zavatra azo.
Nitsidika ny Duke of Cambridge MicrosoftNy foiben-toeran'i dia hihaino ny mety ho an'ity teknolojia ity ho ampahany amin'ny asany miaraka amin'ny programa United for Wildlife an'ny The Royal Foundation. Mba hanohanana ny fivoaran'ity teknolojia vaovao ity, ny ekipan'ny Project SEEKER dia afaka nandray soa avy amin'ny tambajotran'ny United for Wildlife manerantany momba ny varotra bibidia tsy ara-dalàna. Ho fanampin'izay, ny United for Wildlife dia hiara-hiasa amin'ireo fikambanana mpiara-miombon'antoka aminy amin'ny sehatry ny fitaterana hanohanana ny fivoahana eran-tany amin'ny fahafahan'ny SEEKER.
Jonathan Coen, Talen'ny fiarovana ao amin'ny Seranam-piaramanidina Heathrow, dia nilaza hoe: “Project SEEKER sy ny fiaraha-miasantsika amin'ny Microsoft sy Smiths Detection dia hitazona antsika dingana iray alohan'ny mpanao trafika, amin'ny alalan'ny fikarohana ny teknolojia vaovao izay hanampy antsika hiaro ny biby sarobidy indrindra eran-tany. Mila mahita toeram-pitaterana bebe kokoa isika izao mametraka ity rafitra vaovao ity, raha te handray andraikitra manan-danja amin'ny sehatra manerantany amin'ity indostria tsy ara-dalàna ity isika."
Ny United for Wildlife dia mikendry ny hanao izay tsy ahafahan'ny mpanao trafika mitondra, mamatsy vola na mahazo tombony amin'ny vokatra bibidia tsy ara-dalàna amin'ny alàlan'ny fananganana fifandraisana manan-danja eo amin'ny sehatry ny fitaterana sy ny fitantanam-bola, ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny masoivoho mpampihatra lalàna ary mamporisika ny fifampizaràna vaovao sy fomba fanao tsara indrindra eo amin'ireo. mpandray anjara. United for Wildlife dia niara-niasa tamin'ny fikambanana toa an'i Microsoft mba hanairana ny saina momba ny teknolojia izay afaka manohana ny ezaka hanakorontanana ny varotra heloka bevava amin'ny vokatra biby eran-tany.